Skin Care သုံးရမှာ ပျင်းတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးအတွက် 💝 Valentine's Day လက်ဆောင် 💝 👨‍🦰 ယောကျာ်းလေး အများစုက Skin Care လုပ်ရမှာပျင်းကြပါတယ်။ အချိန်မပေးချင်ဘူးဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးအတွက် အကောင်းဆုံး Skin Care လက်ဆောင်က New Skiin Whitening Selfie Face Mask ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၂၀ လောက် အချိန်ပေးရုံနဲ့ Glow and Glass Skin ကို ပိုင်ဆိုင်သွားစေရမယ်နော် ရာသီဉတုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အသားအရေခြောက်သွေ့လာခြင်း၊ ဖိစီးမှုများကြောင့် အရေပြား ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းလာခြင်းတို့ကို သက်သာလာစေပြီး အသားအရေဖြူဝင်းပြီး ညီညာလာကာ အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ 💎New Skiin Mask💎 ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
? ဖြူဝင်း စိုပြေ Glow Skin ? အသားအရေဖြူဝင်းပြီး ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝ ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး Face Mask ကို ရှာဖွေနေလား❔ New Skiin Whitening Selfie Face Mask ရှိတယ်လေ ? New Skiin Mask ကို ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အသားအရေခြောက်သွေ့သူများ၊ တင်းတိပ်၊ အမဲစက်နှင့် အသားအရောင် မညီညာသူများ၊ ဖိစီးမှုကြောင့် အရေပြား ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ၊ Glow and Glass Skin လိုချင်သူများ၊ အသားဖြူဝင်းပြီး အစိုဓါတ်ထိန်းလိုသူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ် အချိန်ပေးရုံနဲ့ ဖြူဝင်း စိုပြေပြီး Glow Skin လေး ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သင့်တော်ပြီး Sensitive Skin ပိုင်ရှင်များပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
❄အေးချမ်းတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ New Skiin Mask က ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်တင်းပေးမှာပါ ? ❄ ဆောင်းရာသီရောက်ပြီဆိုရင် အသားအရေ ခြောက်သွေ့နေလို့ စိတ်ညစ်နေပြီဆို New Skiin Whitening Selfie Face Mask ကို ကပ်ပေးနော် ? ❄ Niacinamide နှင့် Peral Extract က အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပေစေတယ် ❄ Hyaluronic Acid (၆) မျိုးက အရေပြားကို ရေဓါတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးတယ် ❄ Tencel Sheet က နူးညံ့ပြီး တင်းရင်းစေတယ် ဒီလို ဒီလို အစွမ်းတွေကြောင့် ဆောင်းရာသီမှာတောင် Glow and Glass Skin ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
ဆောင်းရာသီမှာ New Skiin Mask နဲ့ဆို မျက်နှာခြောက်သွေ့သွားမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး ? ဆောင်းရာသီလဲ ဝင်နေပြီဆိုတော့ အသားအရေလေး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ အဓိကလိုအပ်တယ်နော် ? New Skiin Whitening Selfie Face Mask မှာ Hyaluronic Acid (6) မျိုး ပါဝင်လို့ အရေပြားကို ရေဓါတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆီနှင့် ရေဓါတ်ပမာဏကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးလို့ အသားအရေ တင်းရင်းမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ အသားအရေကို ချောမွေ့ညီညာစေပါတယ်။ ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
သတို့သမီးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သတို့သားဖြစ်ဖို့ New Skiin Mask နဲ့ အသားအရေကို ပြုပြင်လိုက်ပါ ?‍❤️‍? အမျိုးသား တော်တော်များများက အသားအရေ ထိန်းသိမ်းဖို့ ငြီးငွေ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲမှာတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ပိုပြီး လိုက်ဖက်သွားအောင် အသားအရေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေကို အများဆုံး ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးပြီး ကျန်းမာပြီး ရေဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ အသားအရေရရှိဖို့ New Skiin Whitening Selfie Face Mask ရှိပါတယ်။ အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့ ငြီးငွေ့တတ်တဲ့ သတို့သားလောင်းလေးတွေအတွက် New Skiin Mask ကို အလွယ်တကူ ကပ်လိုက်ရုံနဲ့ အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေပြီး အစိုဓာတ်ရရှိကာ အသားအရောင် ညီညာလာစေပါတယ်။ အသားအရေ တင်းရင်းလာပြီး Glow and Glass Skin ကို ပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။ သတို့သမီးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သတို့သားဖြစ်ဖို့ဆို New Skiin Mask ကို အခုပဲ ကပ်လိုက်တော့နော် ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
အရွယ်မတိုင်ခင် သင့်ရဲ့ မျက်နှာလေး အိုမင်းရင့်ရော်နေပြီလား ဒါဆို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ ? ရေဓါတ်မပြည့်ဝတဲ့ အသားအရေဟာ အိုမင်းရင့်ရော်မှု ပိုမို မြန်ဆန်စေပါတယ်။ ကျန်းမာပြီး ရေဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ အသားအရေရရှိဖို့ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ အနားယူမှုနဲ့ ရေတစ်လီတာခွဲခန့် သောက်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ New Skiin Whitening Selfie Face Mask လေးကပ်ပြီး ပြည့်ဝတဲ့ ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေပြီး တင်းရင်း လှပ နုပျိုစေပါတယ်။ နုပျိုလှပနေဖို့ New Skiin Mask ကို နေ့တိုင်း ကပ်ပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော် Made in Korea ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး နုပျိုတဲ့ အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံး New Skiin Whitening Selfie Face Mask ? ဘယ်လိုအသားအရေအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေမှ အသားအရေက နုပျိုလန်းဆန်းနေမှာပါ။ New Skiin Mask မှာ Hyaluronic Acid (၆) မျိုး ပါဝင်တာကြောင့် ပိုမိုပြည့်ဝတဲ့ ရေဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆီနှင့် ရေဓါတ် ပမာဏကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးလို့ အသားအရေတင်းရင်းမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ အသားအရေကိုလည်း ချောမွေ့ညီညာစေပါတယ်။ ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
ကျန်းမာပြီး စိုပြေတဲ့ အသားအရေ ရရှိဖို့အတွက်..... ☺️ ? ဘယ်လို အသားအရေအမျိုးအစားမဆို ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ? ကျန်းမာပြီး ရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အသားအရေရရှိဖို့ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ အနားယူမှုနဲ့ နေ့စဉ်ရေတစ်လီတာခွဲခန့် သောက်ပေးရပါမယ်။ ? ဒီလိုလုပ်ဖို့ မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ New Skiin Whitening Selfie Face Mask လေးကပ်ပြီး ပြည့်ဝတဲ့ အရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ? New Skiin Mask လေးနဲ့ (၁၀) မိနစ် (၂၀) မိနစ်လောက် ကပ်ပြီးရင်တော့ Nano Spray နဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးမယ်ဆိုရင် အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ ထိရောက်စွာ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတာဖြစ်လို့ အရေပြား ကျန်းမာစိုပြေမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ် Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
Sheet Mask တွေကို ညဘက်တွေပဲ သုံးရတယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ ❓ New Skiin Whitening Selfie Face Mask ကို မနက်ရော ညရော အဆင်ပြေတဲ့အချိန် အသုံးပြုလို့ရတယ်နော် ဒါမှမဟုတ် မိတ်ကပ်လိမ်းခါနီး New Skiin Mask လေး ကပ်ပေးမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်ကြောင့် အရေအကြောင်းဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေလေး တင်းရင်းနေစေပါတယ်။ မျက်နှာလေးကလဲ ဖြူဝင်း ကြည်လင်နေပြီး မြင်သူ လည်ပြန်ငေးလောက်စေမှာ ကျိန်းသေပဲပေါ့ ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်